Konke Owafuna Ukwazi Ngesitayela seBohemian - Okunye
All You Wanted Know About Bohemian Style
Incazelo yencwadi yokufunda ye I-Bohemian ungumuntu onomoya okhululekile, ovame ukuzibandakanya kwezobuciko noma ukwenza izinto zobuciko othanda ukuhlala ngendlela engahlelekile, ngaphandle kokulandela izindinganiso zokuziphatha eziqinile zomphakathi. Futhi isitayela seBohemia isitatimende semfashini esilandelwa yilo hlobo lwe-eclectic lwabantu abathanda izingubo zabo nendlela yabo yokuphila ukuthi bangahambisani futhi bangameleli njengabo.
Ngabe uyahlonza nalaba bantu abangajwayelekile, abangajwayelekile ukuthi bangabantwana bezitayela zesitayela? Yebo, sizokusiza ukuhlenga imizwa yakho yemfashini ukuze ukwazi ukwenza isitayela sibe ngesakho. Lapha sikunikeza ukwehla kuzo zonke izakhi ukuthi yakha isitayela seBohemian futhi ngikukhombise izindlela zokwenza isitatimende sakho, esivelele.
1. Siyini isitayela seBohemian?
ezimbili. Izinto zesitayela seBohemia
3. Ukubeka kuyisihluthulelo
Isine. Iziketi nezingubo ezinkulu zeMaxi
5. Imakethe yezikhukhula ithola
6. Iya ngokwemvelo
7. Ubucwebe obungenamsoco
8. Ukufinyelela okufana nomphathi
9. Imihlobiso ye-Quirky
10. Imibuzo Evame Ukubuzwa: Isitayela seBohemiya
Siyini isitayela seBohemian?
Isitayela seBohemian, esibizwa kaningi boho chic noma imfashini ye-boho isitayela sokugqoka esenziwe sathandwa yizingane zezimbali noma ama 'hippies' ngawo-1960 kanye no-1970. Iyageleza, ama-silhouettes angahlelekile, ama-head-band, imidwebo ebamba amehlo, imibala ephilayo , izibuko zelanga ezinde kakhulu, ubucwebe obungenamsoco, izimbadada ezivulekile, nezindwangu zemvelo ngezinye zezinto ezaziveza lesi sitayela. Kamuva, lesi sitayela samukelwa ngosaziwayo abaningi, owaziwa kakhulu ngoSienna Miller noKate Moss abazenzela lesi sitayela.
Eqinisweni, bobabili laba besifazane abababazekayo babizwa njengezithonjana ze-boho-chic ngendlela enhle abayithathe ngayo boho vibe . Siphinde sihlotshaniswe nemikhosi yomculo efana neWoodstock neCoachella, isitatimende sesitayela sasihlonishwa ngama-celebs afana noVanessa Hudgens no-Emily Ratajkowski phakathi kwabanye. Ungasinyakazisa isitatimende sesitayela ngokufaka ezinye zezinto eziyinhloko ze-boho ekubukekeni kwakho.
Izinto zesitayela seBohemia
Isitayela seBohemian 1 kumayelana nokufeza ukubukeka okungafakwanga, nokukhululeka. Kukhuthazwe ngama-gypsies abembethe kahle kakhulu konke abanakho ngenkathi behamba, ukubukeka akukhona ngokufanisa izingubo zakho noma ukuxhumanisa ingqikithi kahle. Kungaphezulu kokuhlanganisa izinto ze-eclectic kusuka ekhabethe lakho ukuze wakhe ukubukeka kwe-gypsy chic okuhambisanayo.
Ithiphu: Gqoka ingubo enemiphetho nge-cleavage ejulile ngaphezulu kwe-bralette. Ungangeza ibhantshi elifushane phezu kwalo ukuze uqhubeke ubeke. Ithimba elinama-denim izikhindi nokufinyeleleka ngobucwebe obuningi obungenamsoco.
Iziketi nezingubo ezinkulu zeMaxi
Izingubo ezihlanganisiwe, iziketi ezincane, nama-silhouettes ahlelekile awasiniki kahle isitatimende sesitayela. Kufanele uhlose ukubukeka upholile futhi ungathandeki ngokude, ama-silhouettes ahambayo ... cabanga iziketi ezinkulu nezingubo zabampofu. Amahembe amakhulu namabhantshi angahlelekile nakho ukubheja okuhle. Induduzo iyisihluthulelo!
Ithiphu: Uma ufuna ukuzinika isithunzi esincane ku-unstructured izingubo ze-boho , zihlanganise nezicucu ezifakiwe njengejakhethi elifushane le-denim noma i-leggings. Ungase futhi ucije okhalweni lwakho ngebhande lesikhumba elibanzi lesikhumba.
Imakethe yezikhukhula ithola
I- uhlobo oluhle kakhulu lwesitayela seBohemia ukuthengiselana kuzotholakala ku- izimakethe ezikhungethe . Abaxhasi besitayela seBohemia bakholelwa ngokuqinile ekusimameni ngokusebenzisa kabusha nangokusebenzisa kabusha izinto. Ngakho-ke, uma ufuna ukuba yiBohemian yangempela enhliziyweni hhayi nje ukwenza isitatimende semfashini, funa izingubo ezingamasekeni ezimakethe ezikhungathekisayo endaweni yangakini. Ngeke uthole kuphela ukutholwa kwe-vintage okumangalisayo okulungele ukwakheka, kepha uzobe unikela futhi emvelweni.
Ithiphu: Hlala uye emakethe yezikhukhula unesikhathi esiningi esandleni. Uzodinga ukuhlunga ama-racks nezingubo zezingubo ngaphambi kokuthola izingcezu zokuvuna ozifunayo. Hlala ubheka ikhwalithi enhle, izingcezu zakudala ezifana namajakethi, amajazi, ama-denim nesikhumba ezikhula kahle.
Imfashini ingenye yezinto ezingcolisa imvelo ngobukhulu lapho wena yenza ukukhetha kwakho kwesitayela , kufanele uqaphele umthelela ingubo yakho onayo ku-eco-system. Gwema imicu yokwenziwa efana nohlupho — kungabikho inayiloni, i-spandex, i-acrylic, i-polyester, noma i-polypropylene. Ucwaningo lukhombisa ukuthi izigidi zama-microfibres epulasitiki avela ezindwangu zokwenziwa ziyagezwa zingene ohlelweni lwendle futhi zigcine zingcolisa ulwandle.
Ngakho-ke khetha imicu yemvelo efana noboya, usilika ongenanya kanye nemicu yezitshalo ezitshaliwe nezakhiwe ngendlela efanelekile njengoqalo, ilineni, ukotini, i-jute ne-hemp. I-Organic igama elingukhiye lapha ngoba, ngokwesibonelo, ukotini ojwayelekile, ngenkathi uyi-fiber yemvelo, isitshalo esisebenzisa kakhulu isibulala-zinambuzane esidinga inani elikhulu lamanzi nodayi abanobuthi kanye nebleach ukucubungula.
Ithiphu: Gwema udayi onobuthi ngokuthenga izindwangu eza ngemibala engokwemvelo enjengokhilimu, umbala onsundu ngokukhanyayo noluhlaza okotshani okhanyayo noma ezifakwe umbala ngodayi bemvelo.
Ngokuhambisana nefilosofi yesitayela yokusekela ubuciko bendawo nezingcweti, gwema ukuthenga ama-run-of-the-mill yizindebe zemikhiqizo emikhulu bese ukhetha izesekeli ezenziwe ngezandla nezenziwe endaweni ezenziwe ngabenzi bamakhono. Isibonelo, ungabukisa ngobucwebe be-terracotta nobucwebe bezingcweti zaseBangal, uqalo nobucwebe bohlamvu lwemali ngabenzi bezingcweti abavela enyakatho-mpumalanga namabhinca ahlukile e-bidri avela eKarnataka.
Ithiphu: Faka i-pizzazz eningi engutsheni yakho ngokungeza i- umgexo we-chunky eyenziwe ngobuhlalu besiliva, bokhuni, bendwangu noma bengilazi. Gqoka amacici e-gypsy alengayo — siyayithanda inhlobonhlobo yokubamba amaphupho ngezimpaphe noma imicu ephilayo nobuhlalu indandatho enkulu yeminwe yesitatimende kanye nephini lekhala elibamba amehlo kuzokuqedela ukubukeka.
Ukufinyelela okufana nomphathi
Ukwakha isitayela sesiginesha , khetha izesekeli zakho ngokuhlakanipha-cabanga amabhande, izikhafu, izigqoko namabhande ekhanda! Lezi zinhloso eziningi kanye isitayela esinemisebenzi ehlukahlukene izesekeli zizokunikeza ukubukeka okujabulisayo, okujabulisayo. Qala ukugcwala kwizikhafu ezimibalabala ngokuprinta okuhle okungagqokwa entanyeni yakho, njengebhande lekhanda, nxazonke zamahlombe akho njengotshali, nasokhalweni lwakho njengebhande.
Amabhande awusizo kakhulu uma kukhulunywa ngezingubo zeBohemia ngenxa yendlela ezinikeza ngayo izingubo ezikhululekile, ezingakhiwe kahle. Thatha izinketho ngesikhumba, i-crochet noma i-macramé, ubuhlalu, izinsimbi-izinketho azipheli.
Faka imali ezicathulweni zaseBohemia. Qiniseka ukuthi umugqa wakho wezicathulo unokhetho lwe-suede amabhuzu amaqakala , ama-gladiator noma izimbadada ezivulekile, nama-clogs.
AmaPurses nezikhwama: Isikhwama seBohemia noma isikhwama semali kubalulekile ekuhlanganiseni ukubukeka okulula. Khetha i-hobo enkulu kakhulu enemiphetho, indwayimane yokuwela emzimbeni esikhunjeni esikhathazekile nemiphetho esikhwameni esikhulu se-floppy noma esikhwameni se-canvas messenger!
Ithiphu: Izigqoko ezinhle zizokusiza ukuhambisa leso sitayela se-badass sokugcina. Khetha isigqoko se-cowboy noma i-floppy enhle, noma i chic fedora ngaphezulu kwamantombazane akho axegayo we-wavy ukubopha ukubukeka. Izigqoko ezinazo ugqozi lwe-boho intshakaza , izintelezi noma imivimbo ekhanda kuzokwengeza ubuqiniso obuningi. Ithimba elinengubo ekhululekile eqhweqwe ngebhande lesikhumba, izikhindi ze-denim ezisontekile, nezimbadada ze-gladiator ezinde emadolweni.
Enye yezinto ezibalulekile zesitayela seBohemia ukuhlobisa kwesiginesha okusetshenziselwa okokugqoka nakwizesekeli. Amasentshisi, imiphetho, izimpaphe, izintelezi zenhlanhla, nokufekethiswa kusetshenziswa ngokukhululekile ezingutsheni, ezikhwameni, kumajakhethi, emashalofini naseziqongweni. Amaphethelo enziwa ngesikhumba, ngentambo noma ngentambo futhi asetshenziswa emabhuzwini, ezikhwameni, kumajakethi naseziqongweni. Ngokugcizelelwa kwendalo eyenziwe ngezandla, izingubo zaseBohemia zivame ukwenziwa zikhishwe noma zihlotshiswe nge-crochet, lace nange-macramé.
Ithiphu: Imifekethiso ikakhulu imidwebo yezimbali ingeza i-gypsy vibe yobuciko engutsheni yakho. Ungasebenzisa futhi ama-applique, amakristalu, ama-sequin, ubuhlalu ne-lace ukuhlobisa izingubo zakho nezinsiza.
Imibuzo Evame Ukubuzwa: Isitayela seBohemiya
U. Yiziphi izinto eziyinhloko zesitayela?
TO. Izithunzela ezigelezayo, ezingakhiwe kahle, amabhande asekhanda, imidwebo ekhanga amehlo, imibala egqamile, izibuko zelanga ezinkudlwana, ubucwebe obungenamsoco, izimbadada ezivulekile, nezindwangu zemvelo ngezinye zezinto eziveze lesi sitayela.
U. Hlobo luni lwezesekeli okufanele ngilusebenzise ekubukekeni kwesitayela seBohemia?
TO. Ukufeza i- Ukubukeka kweBohemian , accessorise ngamabhande, izikhafu, izigqoko namabhande ekhanda!
Thatha amabhande ngesikhumba, i-crochet noma i-macramé, ubuhlalu nezicathulo zensimbi njengamabhuzu ama-suede ankle, ama-gladiator noma izimbadada ezivulekile, nezikhwama ze-clogs noma izikhwama ezinezigqoko ezinjengezigqoko ze-cowboy, noma i-floppy, izigqoko zotshani noma ama-fedoras ama-chic.
U. Hlobo luni lobucwebe okufanele ugqoke lezi zingubo?
TO. Thenga imfucumfucu noma ubucwebe obenziwe ngezandla besizwe obenziwe ngabadwebi bendawo nabasebenza ngezobuciko. Khetha u-bamboo, insimbi, iterracotta, igobolondo nobucwebe bohlamvu lwemali. Izesekeli ezenziwe ngezimpaphe, ubuhlalu, imicu, kanye nemisipha nazo zibukeka zizinhle.
umzimba ukunciphisa amafutha okhalweni
ukuhambisana kwezimpawu ze-libra zodiac
isikhulu william ukuphakama ngezinyawo
ungayikhipha kanjani i-nail polish ngaphandle kwesisusa ekhaya
ukwelashwa kokuwa kwezinwele ngamakhambi ekhaya